Kalshaale: Isku dhac kooban oo shalay galab ka dhacay + DHAGEYSO | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS, Somaliland	> Kalshaale: Isku dhac kooban oo shalay galab ka dhacay + DHAGEYSO
Wednesday, March 2, 2011 Laaska News
Hawd- Wararka laga helayo deegaanada Hawdka ayaa sheegaya in shalay galab ay isku soo baxeen dhalinyaro reer Buuhoodle iyo Ciidanka Somaliland ee ku sugan Aaga Kalshaale,waxaana kasoo baxaya warar kala duwan sida ay ragga dhalinyarada ee ka soo jeeda deegaanada Buuhoodle ay ku tageen aaga Baliga Kalshaale.
Wariyaha BBC Mr.xagar ayaa sheegay in ciidanka Soomaaliland oo isku uruursaday Baliga Kalshaale,shalay galabtii ay soo weerareen dhalinyaro kasoo jeeda deegaanka Buuhoodle,halkaasina uu ka dhacay isku dhac sababayna dhaawac fudud inuu gaaro mid ka mid ah dhalinyaradii kasoo jeeday Buuhoodle.
Mr.xagar ayaa ku daray in ciidamada qaarkood dib looga soo qaaday fariisimihii hore ee Ciidanku fadhiyay,Maxaabiistiina la soo daayay , berkadihiina la’aasay.
Wariyaha Mr. Xagar ayaa waxa kale uu sheegay in Salaadiin ka mid ah Salaadiinta ugu magac weyn Buuhoodle iyo Deegaankeeda oo ay ka mid yihiin Suldaan Saciid Cismaan Cali iyo Suldaan Maxamed Saleemaan Galaydh ay arrintaa shir deg deg ah ka yeesheen, kadibna ay xiriirna la soo sameeyeen BBC da shirkii iyagoo fadhiyana ay u doorteen inuu mawqifkooda sheego Mr. Axmed Cawil Bacaluul oo ah nin Ganacsade ah.
“Mr. Bacaluul oo ka war bixiyay dhacdada ayaa sidaa si ka badalan usheegay waxaana hadaladiisa kamid ahaa: in shirkoodu ku saabsanaa khatalaadii kadhacday iyo nabadii socotay caqabad buu ku yahay, inamadu ay ku khatalmeen tagitaanka Kalshaale,waxayna ahaayeen wiilal aan badnayn oo loo sheegay in ciidankii ay ka guureen halkaa oo ay is yiraahdeen soo eega,waxayna mar kaliya arkeen iyagoo dhextaagan ciidankii,khatalaad bay udhacday,mana ahayn ku talagal,waan ka xun nahay,kana cudur daaranaynaa”.
Mr.Bacaluul ayaa ku baaqay in labada dhinacba la adkeeyo nabadda.
Waxaa kale oo uu kudaray inay ka raali noqdaan dhacdadan darafyadii ay dhibuhu kala gaareen.
Darafkaasina uu dhamaystiro tallaabooyinkiisii waxa ka dhiman.
Nabadana la adkeeyo labada dhinacba.
Dhinaca kale Maamulka Somaliland ayaa dhacdadaa qoraal ka soo saartay waxayna ku sheegeen talaabooyinka ay qaadeen ee ah xagga Aasida Barkadaha Kalshaale iyo Soo daynta Maxaabiista ,waxay kaloo ku dareen in ciidanku dib uga soobaxay meelihiisi hore.
Waxa kale oo ay sheegeen inay wadayaan nabada.
Waxay xuseen inay jiraan dad nabad diid ah oo aan raali ka ahayn talaabooyinka nabadda.
Waxayna sheegeen inay jiraan kooxo nabad diid ah oo ku gabanaya dadkaa oo aan ogolayn in nabad lagu wada noolaado.
Waxayna ugu baaqeen dadka wax garadka ah iyo odayaashu inay iska qabtaan.
Iskusoo wada duubo waxaa muuqata in ay socdaan wadahadalo iyo talaabooyin lagu raadinayo in lagu dhameeyo colaada ka aloosan Kalshaale.
Waxaa kaloo muuqata in talada deegaankaasi aysan meel kaliya go’in colaad ama nabadna sida ay u meel mariyaan ay adkaanayso haddaanay qaadan go’aan isku mid ah.
Muqdisho:Maxkamada Ciidamada oo maanta ridday xukunno kala duwan Lasanod:Mudaharaad Galabta ka dhacay